CLERKS TERNOPIL CAWSKA DIIRAN - MAQAALLO
Mashruuca "Abuuritaanka Xarunta Biyoenerka iyo Maareynta Awooda Deegaanka" ayaa u oggolaanaya cilmi-baarayaasha Ukriga in ay abuuraan agroinvention aan caadi ahayn.
Waxaan ka hadleynaa beer gaar ah, kaas oo dhirta laga dhigo meel kuleyl ah. Horumariyayaashana waxaa sameeyey by geesiyaal ka soo gobolka Ternopil.
"Waxaan muddo dheer xiiseyneynaa fikradda ah in lagu koro dhirta khaaska ah ee soo saarta tamar hooseeya, laakiin tamar wax ku ool ah oo kuleyliya," ayaa leh horumariyayaal ka socda degmada Borshevsky ee Ternopil. kor uqaadida wax soo saarka iyo isticmaalka nadaafada jirka ee gobolkaaga gaar ahaan iyo waddanka oo dhan. "
Dhirta koray beerta, waxaa loo isticmaalaa shidaalka adag si loogu kululeeyo dhismayaasha maamulka ee degmooyinka qaar ee gobolka Ternopil.
"Qaabka noocan ah wuxuu ahaa mid aad u fiicnaaday oo loo qoondeeyay 11 hektar oo dheeraad ah oo dhul ah si loo kordhiyo qadar badan oo shidaal khudradeed leh," ayay yiraahdeen beeralayda.